Tesfaalem Waldeyes Stookihoolmtti, bara 2016 miidiyaa hawaasummaa irratti waan maxxanfame (Suuraa: Melodii Sundibergi)
Gulalaaa gameessi marsariitii Ethiopia insider”Tesfalem Waldeyes to’annaa poolisii jala jiraachuu gabaasaaleen sabaa himaa beeksisanii jiran.
Waahiloonni Tesfaalem fi hiriyoonni isaa akka jedhanitti erga sambataa qabee eessa akka inni jiru hin beekamu, garuu poolisiin hidhamuu isaa BBCf mirkaneessuu dhaan yaadda’uun akka irra hin jiraanne ibsee jira.
Poolisiin ibsa itti dabalaa hin kennine, Tesfalem to’annaa jala oolee yeroo gabaabaa booda, daayirikterri ol aanaan waaltaa “Advancement of Rights and Dimocracy” jedhamu Befeqaaduu Haayiluu akka jedhanitti Tesfalem erga ayyaana Irreechaa kan Finfinnee keessaa gabaasee booda achi buuteen dhabame. Befeqaaduun ergaa Twetter maxxansaniin, Tesfaalem ayyaana Irreechaa Bishooftuu kan dilbataas gabaasuuf karoorsee ture jedhan.
Erga ayyaana Irreecha Finfinnee gabaasee booda Tesfaalem viidiyoo hirmaattonni bulchiinsa muummicha ministeeraa Abiy Ahimed qeequ dhiyeessan fuula FB marsariirtii Ethiopia Insider jedhu maxxansee ture.
Tesfalem kanneen marsariitii irratti barreessan ja’aa fi gaaxexeessota sadii bara 2014 keessa himannaan hookkara kaasuu fi shorokeessummaa irratti dhiyaachuun hidhaa keessa turan keessaa ti. Waggaa tokko hidhamee booda irra gad dhiisame. Biloogeroonni salgan CPJ biraa bara 2015 badhaasa walabummaa presii addunyaa argatanii jiran.
Sagataan Barattootaaf Qophaa’e Hoogganoota Qilleensa Naannoo Kunuunsan Jajjabessa Jedhame